Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Tompon’andraikitra avokoa | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Tompon’andraikitra avokoa
Mihoron-koditra avokoa ny ankamaroan’ny olona noho ny fahenoana ny fihanak’ilay valan’aretina. Tsy mitovy arak’izay ahiahy izay anefa ny fanajana ny fepetra natao hisakanana ny fiparitahan’ilay virus. Tsy ny fifanomezan-tsiny no ahafahana mandravina ny fiarahana. Ny firaisan-kina eo amin’ny fanajana fepetra iombonana no hany antoka ho amin’ny fandresena an’ilay coronavirus sy isorohana ny tsy fitrangan’ny fahafatesana noho ilay aretina covid 19 aterak’ity virus ity. Nifofo aina iray izao io aretina io teto amin’ny nosy ary fantatra ny setrasetra nataony tany ivelany, aman’alina aman-hetsy mihintsy aza ireo olona namoy ny ainy tamin’ny famelezan’io aretina io. Rariny raha samy matahotra daholo. Ny antony mahatonga ny olona sasany tsy dia ampy fitandremana ara-dalana dia noho ny tsy fahafantarany ny hafainganan’io otrikaretina miampitapita. Tsy lavitra fa tetsy Manarintsoa iny fifindran’ilay virus tamin’olona 13 noho ny fikasokasohan’izy ireo tamin’ny olona iray nitondra an’ilay virus. Natokan-toerana ireto olona 13 ireto mba tsy hamindra amin’ny olona sasany. Tsy fantatra anefa izay efa nipetahan’ilay virus, fa raha navela amin’izao dia nitombo izay tsy izy ny olona nifindran’ilay aretina. Afaka heverina fa ao anatin’ny 6 andro dia nifampikasoka tamin’ny olona 10 hafa ny tsirairay tamin’ireo 13 ireo, 6 andro manaraka dia olona 130 indray no nampita an’ilay virus, dia mitohy hatrany izany hoe ao anatin’ny iray volana dia in-dimy nanampy 0 ahafantarana ny olona voakasoka. Mbola maro noho izay raha samy olona nisisitsisika tamin’ny fitangoronam-bahoaka noho ny antony samihafa no mbola mitangorona ka tsy manaraka ny fepetra toy ny manao arovava sy ny fanelanelanina sahabo iray metatra raha kely.
Samy tompon’andraikitra daholo ny rehetra. Tsy maintsy tohizina hatrany ny fanentanana sy ny fampatsiahivana ny fanajana an’ireo fepetra rehetra. Misy hatrany ireo mihoa-pefy, ka mba tsy ampitondra faisana ny maro eto amin’ny fiarahamonina ny fanjakana izany hoe ny tompom-pahefana no tompon’andraikitra indroa miantaona, voalohany eo amin’ny fanapahana an’ireo fepetra ahafahana miaro ny mponina tsara indrindra araky ny fiheverany an’izany, faharoa ny mandray didy ahafahana miantoka ny fampiharana ny fepetra.
Ao anatin’ny fotoana sarotra ny firenena, tsy izao no hiady hevitra, ny fanajana ny didy sy ny lalàna no anjaran’ny miaramila an’ady, ny olom-pirenena tsirairay dia miaramila avokoa ao anatin’ity ady amin’ny coronavirus ity